Lokuhlawula, isixa-mali esiyi intlawulo ngetyala esijikelezayo kunokwenzeka?
トップページ ＞ 言語 ＞ コーサ語 ＞ Lokuhlawula, isixa-mali esiyi intlawulo ngetyala esijikelezayo kunokwenzeka?
olujikelezayo ngetyala, kwelinye icala elinye kunye lula lokukwazi ukusebenzisa kuphela ukuhlawula isixa esiqingqiweyo ngenyanga imali, ixesha de kube kuyenzeka zilandelwa simo siqhubeke iintlawulo nasemva kokuba, usenokuba engqondweni mthwalo kwandisa. Ukongeza, ngama-15% lonyaka umyinge wenzala oluthi lusetyenziswe ngayo ngetyala esijikelezayo, ekubeni oko kuya kuhlawula eninzi inzala ibe nomdla njengoko ixesha elide, baninzi kanye abantu bacinga ukuba ufuna imbuyiselo.
intlawulo ezihlangeneyo, nangona isixa semali ekhoyo
lokuhlawula ngetyala esijikelezayo yindlela iingxoxo kwi nkampani ikhadi lamatyala inkampani nganye yahlukile, ifumaneka kuzo zonke nkampani. Zombini iinkampani, efanayo ngendlela ngokusebenzisana kunye negama lenu usebenzisa ikhadi ukufuna "olujikelezayo intlawulo credit" iza kuboniswa. Xa lokuhlawula, ngoko kuya ngesiseko akhawunti ugqithiselo, kwakhona, uza kuhlawula ngomdla ifakiwe.
wayeke sele zihlawulwe ngexesha, ukuba ihlole indlu ukusuka apho, iya kunceda ikamva ebomini. Oku nganye inkampani khadi, ubelungiselela window lo mbuzo, kuya kuba inkqubo dibana apho. Ukususela akhawunti usebenzisa ukutshintshela, oko ngoku kubuyekezwa ngokupheleleyo ngokohlobo ixabiso ezikhoyo seyibuyisiwe phambi komhla ukurhoxiswa.
Ukongeza kwemali oluzenzekelayo ribonucleic bulk, ngokuxhomekeke inkampani, ngokuzenzekelayo kukho kwenziweyo credit olujikelezayo khankanya kwaye isicelo ikhadi, nayo zingatshintshwa kuyo credit olujikelezayo ukusuka intlawulo ezihlangeneyo, awunakho ukwenza ngolunye uhlobo kukho kwakhona ikhadi leyo a.
le meko olujikelezayo ikhredithi kuqinisekiswa, iya kuba ukususela debit isixa esiqingqiweyo se olujikelezayo ngetyala okokuqala, xa inkqubo uhlawule ngokuhlangeneyo imali eseleyo ribonucleic owenziwa phambili eseleyo. Kulo mzekelo, unako kubuyekezwa inkqubo yokutshintsha intlawulo ngetyala esijikelezayo.
ribonucleic Umzekelo, kukho 15,000 amabango yen kwezi amakhadi, qondo liphezulu ribonucleic lusetelwe ku 5000 yen Ukuba, kwaye sitsale i olujikelezayo ngetyala 5000 yen okokuqala kwaye ukuqinisekisa imboleko olujikelezayo, yen 10,000, nokugqithisela-over balance kukho indlela yokuba intlawulo. Malunga 180 yen debit sokuqala, uya kuthabatha umdla yen malunga 120 kwinyanga ezayo.
Ukongeza, emva kokuba uqinisekise adunyiswe olujikelezayo okokuqala, kukho kwakhona indlela imali transfer ukuba ziqhubele phambili imali eseleyo kwi-akhawunti elikhethiweyo wenkampani lekhredithi. Kulo mzekelo, ayithethi ukutshintsha umdla nokurhoxa sokuqala, xa kwabuyekezwa, hayi kuphela ukuthabatha nzala ukuya imini. YokuGqithisela umdla umthwalo apha. Ikhosi
naye yenye indlela
ezinye utshintsho, kukho kwakhona indlela eya kuba ukutshintsha indlela ajikelezayo ngetyala. Umzekelo, ukuba iintlawulo zenyanga 5,000 yen Kakade, xa kwafika amabango yen 20,000, iphakama ikhondo ajikelezayo ngetyala. Nelona qondo liphezulu lekhadi olujikelezayo iye ku 100,000 yen kuninzi kwinkampani lekhredithi. Kulo mzekelo, Ukuphakamisa mda eliphezulu ukuya 20,000 yen, uya kukwazi ukuhlawula ngokuzenzekelayo batch.
Noko ke, ukusukela ngetyala olujikelezayo kujongwe ukuba ube nomdla ukuthatha ngeniso kwinkampani khadi, kunzima ukutshintsha okwethutyana ukusuka ngetyala olujikelezayo kule khosi akukho umdla isixa semali ngaphandle kwenzala. Xa ezininzi inkampani ngecredit card, kuya kuba luhlobo imali transfer ninzi ngokubonisana efowunini. Kukho kwakhona ikhadi ikhondo kwenziwa njalo a khulula, kwimeko apha, intlawulo kusenokwenzeka ukuba intlawulo ngexesha olunokuba ebumbeneyo imali.
Nguwo lowo umthwalo. Ikhosi